Coagulation Therapy, Automated Esr - Succeder Technology Inc.
Download My Order Hiditra
ESR sy HCT
Rheolojia amin'ny rà
Ny sandan'ny anjara Beijing Succeder Technology Inc.
SUCCEEDER dia hita ao amin'ny Life Science Park ao Beijing Shina, naorina tamin'ny 2003, SUCCEEDER manokana amin'ny vokatra fitiliana thrombosis sy hemostasis ho an'ny tsena manerantany.
Amin'ny maha-iray amin'ireo marika malaza ao amin'ny tsenan'ny Diagnostika Shinoa momba ny Thrombosis sy Hemostasis, SUCCEEDER dia efa za-draharaha amin'ny ekipa R&D, Production, Marketing, Sales and Service, Famatsiana mpanadihady sy reagents, mpanadihady rheology amin'ny rà, ESR sy HCT mpandinika, mpandinika platelet aggregation, miaraka amin'ny ISO 13485, Fanamarinana CE, ary voatanisa FDA.
Fanadihadiana coagulation mandeha ho azy tanteraka
1. Natao ho an'ny Lab Large-level.
2. Fanadihadiana mifototra amin'ny viscosity (Clotting mekanika), immuno...
1. Natao ho an'ny laboratoara mid-lehibe.
2. Fanadihadiana mifototra amin'ny viscosity (fampidinana mekanika), fitiliana immunoturbidimetric, fitiliana chromogenic.
3. Barcode ivelany sy mpanonta (tsy omena), fanohanana LIS.
1. Viscosity mifototra (Mekanika) rafitra detection.
2. Fitsapana kisendrasendra amin'ny fitiliana clotting.
3. mpanonta USB anatiny, fanohanana LIS.
Automated ESR Analyzer SD-1000
1. Manohana ESR sy HCT miaraka.
2. Toerana fitsapana 100, 30/60 minitra fitsapana ESR.
3. mpanonta anatiny.
4. Fanohanana LIS.
5. Tsara kalitao miaraka amin'ny vidiny mahomby.
2. Toerana fitsapana 20, 30 minitra fitsapana ESR.
Mpanadihady Rheologie Ra mandeha ho azy tanteraka
2. Fomba roa: fomba takelaka cone, fomba kapila.
3. Plates santionany roa: Ny ra manontolo sy ny plasma dia azo atao miaraka.
2. Fomba roa: fomba fihodinana Cone plate, fomba kapila.
3. Non-Newtoniana mari-pamantarana manara-penitra nahazo Shina National Certification.
4. Fifehezana tsy Newtoniana tany am-boalohany...
1. Natao ho an'ny Lab kely-Salantsalany.
2. Rotational Cone plate fomba.
4. Fanaraha-maso tsy Newtoniana tany am-boalohany, kojakoja azo ampiasaina ary...
1. Natao ho an'ny Lab kely ambaratonga.
4. Fanaraha-maso tsy Newtoniana tany am-boalohany, kojakoja azo ampiasaina ary fampiharana...
Semi Automated Rheology Analyzer
* Fomba turbidimetry photoelectric miaraka amin'ny tsy fitoviana ambony
* Fomba fihetsehana bara magnetika amin'ny cuvettes boribory mifanaraka amin'ny zavatra fitsapana isan-karazany
* Fanontam-pirinty namboarina miaraka amin'ny LCD 5 mirefy.
Ahoana no hisorohana ny clots ra?
Raha ny marina, ny trombose venous dia azo sorohina sy azo fehezina tanteraka.Mampitandrina ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana fa ny adiny efatra amin'ny tsy fihetsehana dia mety hampitombo ny loza ateraky ny venous th...
Inona avy ireo soritr'aretin'ny fivontosana ra?
Tsy misy soritr'aretina ny 99% amin'ny fivontosana ra.Ny aretina thrombotic dia misy trombose arterial sy thrombosis venous.Ny thrombosis arterial dia matetika mahazatra kokoa, fa ny thrombose vena ...
Ny loza ateraky ny fivontosan-dra
Ny thrombus dia toy ny matoatoa mandehandeha ao anaty lalan-dra.Raha vantany vao voasakana ny lalan-drà, dia ho malemy ny rafi-pitaterana rà, ary mahafaty ny vokany.Ankoatra izany...
Ny dia lavitra dia mampitombo ny mety hisian'ny thromboembolism venous
Ny fanadihadiana dia naneho fa ny mpandeha fiaramanidina, lamasinina, bisy na fiara mijanona mandritra ny dia mandritra ny adiny efatra mahery dia atahorana ho voan'ny thromboembolisme venous vokatry ny causin...
Fanondroana diagnostika momba ny fiasan'ny coagulation
Ny diagnostika momba ny coagulation amin'ny rà dia matetika ataon'ny dokotera.Mila manara-maso bloo ny marary manana toe-pahasalamana sasany na mifoka fanafody anticoagulant...
Ny dia lavitra dia mampitombo ny risika o...
Fanondroana Diagnostika amin'ny Coagulation Ra...
Addr: 8F, Boya CC Bldg 11, Life Science Park, Beiqing Road, Changping District, Sina